हिमालय खबर , ८ चैत्र २०७३, मंगलवार - जसको नामै सुदूर छ, अर्थात सुदूर पश्चिम । जहाँ सूर्य पनि अस्ताउनमात्रै पुग्छ भनिन्छ । हो, त्यही ठाउँमा जन्मेको एउटा मान्छे अहिले संसारकै पश्चिममा आइपुगेको छ । तर संसारको सुदूर पश्चिमचाहिँ उसको गाउँज ...
म पनि अमेरिकी सिस्टम अनुसार फेरि अध्यक्ष हुन्छुः डा. केशव पौडेल (भिडियो सहित)
हिमालय खबर , १० फाल्गुन २०७३, मंगलवार - टेक्सस (अमेरिका)- गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अमेरिकाको निर्वाचन मिति नजिक हुँदै जाँदा नयाँनयाँ उम्मेदवारी घोषणा हुँदैछन् । यसैक्रममा वर्तमान अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दि ...
साहित्यकार धरावासीको तल्लो बाटो
हिमालय खबर , २४ माघ २०७३, सोमबार - साहित्यकार कृष्ण धरावासी अर्को नयाँ लेखन-साधनामा व्यस्त छन् । यसपटक उनी लीला लेखनको कलाबारे लेख्दै छन् । लीला लेखनबारे प्रष्टाउने उनको यो कृति सर्वथा नेपाली साहित्यमा नयाँ प्रयोग हुनेछ । उनको अर्को ...
पीआर र ग्रिनकार्ड लिने नेपालीले भोट हाल्न पाउंछन् पराराष्ट्रमन्त्री डा महत (भिडियो अन्तवार्ता)
हिमालय खबर , १२ माघ २०७३, बुधबार - हिमालयखवर संवाददाता- विदेशमा स्थायी बसोबास गर्न ग्रिनकार्ड वा पीआर लिएपनि मतदानमा भाग लिन सक्ने पराराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय पर ...
एनआरएनको इतिहास नबुझिदिनु नै दुर्भाग्य हो : डा. तारा निरौला
हिमालय खबर , १५ पुष २०७३, शुक्रबार - डा तारा निरौला अमेरिकामा रहेका नेपालीहरु माझ नेपाल र नेपालीहरुको बारेमा राम्रोँ दख्खल राख्ने ब्यक्तिको रुपमा चिनुहुन्छ नेप्लिज अमेरिकन काउन्सिल का पुर्ब अध्यक्षसमेत रहेका निरौला एनआरएन अमेरिकालाई य ...
हिमालय खबर , १२ पुष २०७३, मंगलवार - भरतपुर, (चितवन)– अमेरिकाको नेपाली समाजमा गौरी जोशी अपरिचित नाम होइन । नेपालीहरुका हरेक कार्यक्रमहरुको प्रायोजन गर्ने, हेर्दा अति सामान्य यी व्यक्तित्वलाई नचिन्ने अमेरिकामा सायदै कमै छन् । ...
Fireside with PM Puspa Kamal Dahal 14 Nov
हिमालय खबर , २९ कार्तिक २०७३, सोमबार -
जीवनको उत्तराद्र्धमा पनि साहित्यबाट विश्राम नलिने साहित्यकार प्रेमविनोद नन्दन भन्छन् : ‘प्रेम अनुभूति हो, जीवन अनुभवको शब्दकोष हो’
हिमालय खबर , ४ कार्तिक २०७३, बिहीबार - विक्रम संवत् १९९२ सालमा तनहुँको बन्दीपुरमा जन्मिएर नेपाली साहित्य बाटिकालाई सिंगार्दै आउनुभएका प्रेमविनोद श्रेष्ठ राष्ट्रका अमूल्य निधि र चितवनवासीका लागिसमेत आस्था र गौरवका पुञ्ज हुनुहुन्छ । अग्रज ...
आत्माको आवाज लेख्दा आमाको अनुहारले नछेकोस् -शिव प्रकाश
हिमालय खबर , ३ कार्तिक २०७३, बुधबार - धेरै सत्य उधिन्ने र थोरै कल्पनामा डुवेर लेख्ने लेखक हुन साहित्यकार शिव प्रकाश । उनका लेखनमा कटाक्षहरु हुन्छन् । तितासत्यहरु हुन्छन् । आठ महिना अघि प्रकाशित उनको “घागी” कथा सङ्ग्रहले धेरैको मन म ...
हिमालय खबर , ६ आश्विन २०७३, बिहीबार - गोरो बर्ण, छरितो जिउडाल, चिटिक्क पहिरन र हसिलो मुहारका कारण अपरिचितको नजरमा उनी माओवादी देखिन्नथिन् । त्यो बेला माओवादीहरुको ‘दाह्रा र सिङ’ हुन्छ भन्ने काल्पनिक कथा व्याप्त थियो । आवरण र आँटको सुन् ...
हिमालय खबर , ३ आश्विन २०७३, सोमबार - (प्रवाशमा रहेर संघर्ष , लगन र परीश्रमबाट सफल हुने नेपालीहरु धेरै छन् । हिमालय खबर त्यस्ता लगनशील नेपाली व्यक्तित्व र संस्थाका आरोह अवरोहलाई पर्गेल्दै उनिहरुका सफलताका कथाहरु पाठकहरु माझ पस्किने अभि ...
टिपीएसबाट नेपाल जाँदा समयमै अमेरिका फर्की सक्नुपर्छ : बासु फुलारा, बिजिनेस इमिग्रेसन एटर्नी
हिमालय खबर , ३१ भाद्र २०७३, शुक्रबार - बासु फुलारा अमेरिकामा नाम चलेका नेपाली कानुन व्यबसायी हुन् । अध्ययनको सिलसिलामा अमेरिका पसेका फुलारा निकै कडा मेहनतले संसारकै फाइनान्सियल क्यापिटलका रूपमा परिचित न्यूयोर्कमा स्थापित भएका छन् । उनी ...
‘विदेशका नेपालीलाई नागरिकता दिँदैमा नेपाललाई घाटा हुँदैन’ - कुमार पन्त
हिमालय खबर , १२ भाद्र २०७३, आईतवार - ड्यालस (अमेरिका)– गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को राष्ट्रिय समिति हुँदै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको उपाध्यक्ष रहनुभएका कुमार पन्त पेशाले होटल व्यबसायी हुनुहुन्छ । लामो समयदेखि जर्मनीमा र ...
एन आर एन अमेरिका नेपालीको सच्चा साझेदार हुनपर्नेमा जोड
हिमालय खबर , ६ भाद्र २०७३, सोमबार - अमेरिकाको न्यूजर्सीमा हुन गइरहेको एन आर एन नवौ क्षेत्रीय सम्मेलनको हिजो आज व्यापक चर्चा छ । हाल उक्त सम्मेलनको भव्यताका लागी अमेरिकी एन आर एन र सम्बन्धित सरोकारवालाहरु व्यस्त छन् । यस अधिवेशनमा न ...
के भन्छन् डा. केसीको समर्थनमा अमेरिकाका नेपालीहरू ?
हिमालय खबर , १० श्रावण २०७३, सोमबार - नेपालमा देखिएको स्वास्थ वेथितिको अन्त्यका लागी करिब दुई साता अघि देखि डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसन अन्त्य भएको छ । अनसनको शुरुमा उनको अनसन प्रति केहि बेवास्ता देखिए पनि पछिल्लो समय व्यापक जनसहभागीत ...